FuJian WaJuFo Sports Technology Co., Ltd. yakavambwa muna 2003 iri muFUZHOU FUJIAN CHINA.WaJuFo inyanzvi yekambani yeBoka inoita munhandare yemitambo kusimudzira zvinhu, kugadzira uye kushambadzira mumisika yemumba neyekunze.
Isu tinopa zvigadzirwa zvina zvikuru zvinoti Artificial Grass, TPE Infilling Granule, XPE uye PET Shock Pad pamwe neEPDM Particle yeRunning Track.Kugadzirwa kwepagore kwehuswa hwekugadzira kunosvika mamirioni matatu masikweya mita, yeTPE inozadza granule ingangoita zviuru makumi mashanu mts, yekuvhunduka pad ingangoita 5 miriyoni square mita.
Nekuti huswa hwekugadzira hunoumbwa nemafuta ekugadzira ayo akagadzirwa nePP uye PE inorganic zvinhu izvo zvisingazokonzerese mabhakitiriya, mold kana mildew, haina chero chinhu chinoita kuti chiwedzere chirwere chevanhu.
Uswa hwekugadzira hunogona kushandiswa munzvimbo ipi neipi yekunze kwegore rose, zvisinei nemamiriro ekunze kana mwaka.Inoratidza kutarisa kukuru uye kusimba kwepamusoro.
Zvichienderana nemisimboti ye kinesiology nemishonga yemitambo, synthetic turf surface yakagadzirirwa kuvandudza kuchengetedzeka kwevatambi uye kucheka kukuvara kwemarunda, tsandanyama nemajoini kuburikidza nekudzikisira kwakakosha kwekukanganisa uye kupokana kana vatambi vadonha.
Nekuda kwehunhu hwemavara akasiyana, kunaka kweUV kuramba uye kudzoreredza kwemoto, kusimba kwakasimba uye hupenyu hurefu pasina shanduko yemavara, huswa hwekugadzira huchabatanidza nzvimbo munzvimbo dzakatenderedza uye zvivakwa, inogona kuve sarudzo yakakwana yenzvimbo dzemitambo, nhandare dzenhabvu, nhandaro. & nzvimbo dzekutandarira, mapaki, zvivanze, magadheni epadenga remba, nezvimwe.
Nyore Kuisa & Kuchengeta
The artificial turf inogona kuiswa inenge pane chero mhando yenheyo yepasi, yakadai seasphalt, simende, kongiri, etc. Nezvimiro zvenguva pfupi yekuisa, kugadzirisa nyore, kupindira kwemvura kwakanaka uye kupikisa kupfeka kwakanakisisa, iyo yakagadzirwa turf ndiyo yakanaka kuva. akaiswa munzvimbo dzepuraimari nesekondari uko nguva yekudzidziswa yakareba uye kuwanda kwekushandisa kwakakwira.
Yakanakisa Muviri & Chemical Properties
Mushure mekuiswa kumazana ezviuru ekuyedzwa kwekupfeka, kurasikirwa nehuremu hwehuswa hwekugadzira fiber ingori 2% -3%.Pamusoro pezvo, kusimba kwesimba, kupindira kwemvura uye kunyungudika kwehuswa hwekugadzira zvese zvinotenderwa, mvura inonaya inogona kudirwa mukati memaminitsi makumi mashanu kubva kumunda uchangobva kunaya zvakanyanya.
Isu paWaJuFo tinodada nehunyanzvi hwedu hunyanzvi uye kugona kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvine mhinduro yakarongedzerwa kune akawanda akasiyana ekugadzira turf mapurojekiti.Kubva 2016, takabudirira kuita mapurojekiti anodarika chiuru, anosanganisira gymnasium, nhandare, mapaki, nharaunda, nezvimwe.
Wajufo Ice uye Sinou Inobatsira Fujian Disa...
Batsira Ruwa rweFujian “The 6th C...